Afrika Mainty · Septambra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Septambra, 2007
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Septambra, 2007
Ogandà : Miverina amin'ireo tondra-drano be ny mpiblaogy
Lahatsoratra Malaza 29 Septambra 2007
Tena nataon'ny mpiblaogy Ogande ho vain-dohan-draharaha nandritra iny tapa-bolana lasa iny ny mitantara ireo tondra-drano be izay nianjady tamin'ny faritry Afrika ambanin'i Sahara. Tena isan'ny voa mafy tamin'izany tondra-drano izany tokoa mantsy ny faritra Avaratra sy Atsinanan'i Oganda, ka olona 250 no namoy ny ainy ary mihoatry ny 150'000 ireo...
Rotaka tany Kampala
Lahatsoratra voalohany! 26 Septambra 2007
Ny blaogy Random Acts of Penmanship[En] dia nametraka tamin'ny aterineto sary maro momba ny rotaka tany Kampala. “Teo am-pisakafoana aho tamin'ny maraina no nahare antson'ny namana iray mampahafantatra ny rotaka ao an-tanàna. Nateliko haingana ny sakafoko ary nirohotra tany an-tanàna aho nanao fanangonam-baovao an-tsary”. Ndesanjo Macha
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Septambra 2007
Karaiba 20 Septambra 2007
Maoritania.:Tsy fahaizana sa fanajana ny fomba amam-panao ?
Lahatsoratra Malaza 17 Septambra 2007
Ny atao hoe “tsara sy meva”dia arakarak’izay maso mijery: Ny vehivavy nofosana sy matavy dia maro mankafia eto Maoritania; araka ny maha-nofosana azy no hilazana azy hoe “manja”.Ny olona vaventy dia heverina ho mpanankarena .Noho izany ,misy tokoa ireo izay mampiasa fomba tsy marim-pototra mba ho manja kokoa araka ny...
Etiôpia : Mpitoraka bilaogy momban'ny Millenium Etiopianina
Etiopia 16 Septambra 2007
Tamin'ny faha 11 septambra 2007, na 1 Merskrem 2000, no niditra tamin'ny Arivotaonany faha-telo i Etiopia raha araky ny alimanaka Ethipianina, fito taona aorian'ny alimanaka Georgianina. Vanimpotoana lehibe tokoa ka nifantoka tamin'izany fankalazana izany ny mpitoraka bilaogy Etiopianina. Nanazava tsotsotra tamin'ireo mpamaky azy vaovao i Ferenge Addis Blog: Ethiopia follows...
R.D. Kongo 15 Septambra 2007
Tanzania 14 Septambra 2007